मेलिनासँग घुमघाम च्याट- जतिसुकै भव्य देश पुगे पनि आफ्नै देश प्यारो
नेपाल लाइभ आइतबार, मंसिर १५, २०७६, १३:५२
सरकार यतिबेला ‘भिजिट नेपाल २०२०’लाई सफल पार्न अनेक अभियान र गतिविधि संचालन गरिरहेको छ। यही क्रममा नेपाल लाइभले पछिल्लो समयकी व्यस्त गायिका मेलिना राईसँग घुमघाम संवाद गरेको छ। संवादका क्रममा मेलिनालाई घुमेकामध्ये सबैभन्दा मनपरेको देश कुन हो भनेर प्रश्न गर्दामा जवाफमा उनी मुस्कुराउँदै बोलिन्, ‘नेपाल’। आखिर किन? प्रस्तुत छ उनीसँगको घुमघाम च्याट:
तपाई कत्तिको घुमघाम प्रेमी हो?
गायनपछिको मेरो दोश्रो रुची हो घुमघाम। त्यसैले गायिका बन्दा मलाई दोहोरो फाइदा भइरहेको छ। पहिलो स्टेज कार्यक्रम पनि पाइरहेकै छु, सँगसँगै देशविदेश भ्रमण पनि भइरहेको छ। यसर्थमा आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु।
अहिलेसम्म कतिवटा देश घुमिसक्नुभयो?
ठ्याक्कै गनेको त छैन तर थुप्रै देश पुगिसकेको छु। युरोप, युके, हङकङ, कोरिया, अष्ट्रेलिया सबै घुमिसकेको छु। खाडी मुलुकहरु पनि लगभग सबै पुगिसके कार्यक्रमका क्रममा।
सबैभन्दा मनपरेको देश कुन हो?
नेपाल नै हो। जतिसकुै भव्य देश र आलिसान ठाउँमा पुगेपनि आफ्नो देश जहिल्यै याद आउँछ। आफ्नै देश प्यारो लाग्यो। यहाँको जस्तो आत्मियता बाहिर पाइँदैन।
नेपालमा घुमेकामध्ये सबैभन्दा मनपर्ने ठाउँ?
थुप्रै छन्। विशेषगरी इलाम, पोखरा, चितवन र धनकुटा।
घुम्दाखेरी सबैभन्दा बढी के कुराले लोभ्याउँछ? कस्तो ठाउँ बढी घुम्न मन लाग्छ?
घुम्दाखेरी सबैभन्दा बढी लोभ्याउने त त्यहाँको वातावरण र सिस्टमले नै हो। मलाई बढीजसो जाडो ठाउँ नै घुम्न मनपर्छ। अझ हिमपात पर्ने ठाउँ। पहेलो र सुन्तला रङ पातहरु हुने रुख भएको ठाउँतिर जाँदा बेग्लै आनन्द आउँछ। अझ कहिलेकाँही त लाग्छ, त्यो कार्टुनमा देखाइनेजस्तै संसार रियलमा पनि भइदियोस्, अनि घुम्न पाइयोस् (हाँस्दै)।
घुम्नुका फाइदाहरु केके हुने रहेछन्?
धेरै छन् फाइदाहरु। काम र व्यवस्तताले निकै थाकिएको हुन्छ। त्यसैले घुम्न जाँदा माइन्ड फ्रेस हुन्छ। एकछिन भएपछि शरीर बोझमुक्त भएको महसुस हुन्छ। नयाँ ठाउँ पनि देख्न पाइन्छ, नयाँनयाँ संस्कारबारे जान्ने मौका हुन्छ। फरकफरक जीवनशैली देख्न र अनुभव गर्न पाइन्छ। अझ सजिलोसँग भन्दा घुम्नु भनेको रमाइलो गर्नु हो। रमाइलो गर्नु भनेको खुशी हुनु हो। खुशी हुनु भनेको स्वस्थ हुनु हो। र, स्वास्थ्यभन्दा ठूलो धन मान्छेको जीवनमा अर्को केही हुँदैन भनेर त हामीले भन्दै, सुन्दै र पढ्दै आइरहेको हो क्यार! (हाँस्दै)
घुम्नेक्रममा सपिङ पनि खुब हुँदो हो?
सपिङ भनेको त छोरी मान्छेको अनिवार्य रुचीमा पर्छ। जुन कम्प्लेक्समा पुग्दा पनि ‘ओ माइ गड’ फिल हुन्छ। नहोस् पनि कसरी, उता हे¥यो कपडैकपडा, ब्यागैब्याग, जुत्तैजुत्ता, गहनैगहना। सपिङ त कति गरिन्छ, कति। कहिलेकाँही कार्यक्रमबाट पाएको पारिश्रमिक सबै सपिङ गरेरै सिध्याइन्छ।
अहिलेसम्मकै यादगार ‘ट्राभल टुर’?
मेरो पहिलो विदेश टुर भनेको युरोपमा भएको थियो। त्यतिबेला युरोपका चार देश बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, स्वीजरल्यान्डमा मेरो कार्यक्रम थियो। त्यही क्रममा फ्रान्सचाँही म घुम्नलाई मात्रै भनेर गएको थिएँ। सायद पहिलो विदेश टुर भएर होला मलाई युरोप टुर सबैभन्दा यादगार टुर लाग्छ। उसै त मलाई चिसो ठाउँ मनपर्ने, सुरुमै त्यस्तै ठाउँ जान पाइएको थियो। ‘स्नो फल’ देखेर म मख्ख परेको थिएँ। विल्कुल फरक अनुभव महसुस भएको थियो।